Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 23:1-56
Jesu anomiswa pamberi paPirato naHerodhi (1-25)
Jesu nemakororo maviri vanorovererwa (26-43)
“Uchava neni muParadhiso” (43)
Kufa kwaJesu (44-49)
Kuvigwa kwaJesu (50-56)
23 Saka vakasimuka vakawanda kudaro, vakaenda naye kuna Pirato.+ 2 Vakabva vatanga kumupomera,+ vachiti: “Takawana munhu uyu achitsausa rudzi rwedu, achirambidza kutera mitero kuna Kesari,+ uye achizviti ndiye Kristu mambo.”+ 3 Pirato akabva amubvunza kuti: “Ndiwe Mambo wevaJudha here?” Akapindura achiti: “Iwe ndiwe uri kuzvitaura.”+ 4 Pirato akabva ati kuvatungamiriri vevapristi nekuvanhu vese: “Ndashaya mhosva ine munhu uyu.”+ 5 Asi vakaramba vachiti: “Anonyonganisa vanhu nekudzidzisa kwaari kuita muJudhiya yese, achitangira kuGarireya achitosvika kunyange kuno.” 6 Paakanzwa izvozvo, Pirato akabvunza kana murume wacho aibva kuGarireya. 7 Paakaona kuti aibva munharaunda yaitongwa naHerodhi,+ akamutumira kuna Herodhi, uyo aivawo muJerusarema mazuva iwayo. 8 Herodhi paakaona Jesu akafara kwazvo. Nekuti akanga ava nenguva refu achida kumuona nekuti akanga anzwa zvakawanda nezvake,+ uye aitarisira kumuona achiita chimwe chishamiso. 9 Saka akatanga kumubvunza mibvunzo yakawanda, asi haana kumupindura.+ 10 Asi vatungamiriri vevapristi nevanyori vakaramba vachisimuka, vachimupomera zvakasimba. 11 Herodhi pamwe chete nevarwi vake vakabva vamubata zvakaipa,+ vakamupfekedza nguo yakanaka zviri zvekumutsvinyira,+ ndokuzomudzorera kuna Pirato. 12 Musi iwoyo Herodhi naPirato vakabva vava shamwari, nekuti izvi zvisati zvaitika vaivengana. 13 Pirato akabva aunganidza vatungamiriri vevapristi, vatongi, nevamwe vanhu, 14 akati kwavari: “Mauya nemurume uyu kwandiri muchiti anoita kuti vanhu vapandukire hurumende. Asi onai! ini ndamuongorora pamberi penyu ndikashaya kuti zvamuri kupomera murume uyu zviri kubva papi.+ 15 Kunyange naHerodhi amushayirawo mhosva, nekuti amudzosa kwatiri, saka onai! hapana chaakaita chakakodzera rufu. 16 Saka ndichamuranga+ ndomusunungura.” 17 * —— 18 Asi vanhu vese vakashevedzera, vachiti: “Urayai murume uyu,* uye tisunungurirei Bharabhasi!”+ 19 (Murume uyu akanga akandwa mujeri nemhosva yekubatsira pakupandukira hurumende kwakanga kwaitika muguta uye yekuponda.) 20 Pirato akashevedzerazve kwavari, nekuti aida kusunungura Jesu.+ 21 Vakabva vatanga kushevedzera, vachiti: “Ngaarovererwe! Ngaarovererwe!”+ 22 Kechitatu akati kwavari: “Nemhosva yei? Atadzeiko murume uyu? Hapana chandawana chaakaita chakakodzera rufu; saka ndichamuranga ndomusunungura.” 23 Vakabva varamba vachingoshevedzera nemanzwi makuru vachiti aurayiwe, uye manzwi avo akakunda.+ 24 Saka Pirato akapa mutongo wekuti zvavaida zviitwe. 25 Akasunungura murume wavakati asunungurwe, uyo akanga akandwa mujeri nemhosva yekubatsira pakupandukira hurumende uye yekuponda, asi akavapa Jesu sezvavaida. 26 Pavaienda naye, vakabata mumwe munhu wekuKurini ainzi Simoni, akanga achibva kumaruwa, vakamutakudza danda rekutambudzirwa* kuti afambe kumashure kwaJesu akaritakura.+ 27 Vanhu vakawanda vakanga vachimutevera, kusanganisira vakadzi vaizvirova neshungu vachichema. 28 Jesu akatendeukira kuvakadzi vacho, akati: “Vanasikana veJerusarema, regai kundichema. Zvichemei imi nevana venyu;+ 29 nekuti, onai! mazuva ari kuuya pachanzi nevanhu, ‘Vanofara vakadzi vasingabereki, uye zvibereko zvisina kubereka, nemazamu asina kuyamwisa!’+ 30 Vachabva vatanga kuti kumakomo, ‘Tiwirei!’ uye kuzvikomo, ‘Tifukidzei!’+ 31 Kana vachiita izvi muti uchiri munyoro, ko kuzoti kana waoma?” 32 Vamwe varume vaviri, makororo, vaiendeswawo kunourayiwa pamwe chete naye.+ 33 Uye pavakasvika panzvimbo yainzi Dehenya,+ vakamuroverera pamwe chete nemakororo acho, mumwe wavo ari kurudyi rwake, mumwe kuruboshwe.+ 34 Asi Jesu aiti: “Baba, varegererei, nekuti havazivi zvavari kuita.” Uyezve, vakakanda mijenya kuti vagovane nguo dzake.+ 35 Uye vanhu vakamira vachitarisa. Asi vatongi vaifinyama vachiti: “Akaponesa vamwe; ngaachizviponesa kana ari iye Kristu waMwari, Akasarudzwa.”+ 36 Kunyange varwi vaimutsvinyira, vachiuya paari vomupa vhiniga+ 37 vachiti: “Kana uri Mambo wevaJudha, zviponese.” 38 Pamusoro pake paivawo nechikwangwani chaiva nemashoko aiti: “Uyu ndiye Mambo wevaJudha.”+ 39 Mumwe wemakororo akanga akaturikwa ipapo akatanga kumutuka+ achiti: “Hausi iwe Kristu here? Zviponese, wobva watiponesawo!” 40 Mumwe wake akabva amutsiura achiti: “Hautyi Mwari here, sezvo wapiwa mutongo wakafanana newake? 41 Isu tatongwa zvakakodzerana nesu, nekuti tiri kuwana zvinoenderana nezvatakaita; asi murume uyu haana chaakatadza.” 42 Akabva ati: “Jesu, mundiyeukewo kana mapinda muUmambo hwenyu.”+ 43 Uye iye akati kwaari: “Chokwadi ndinokuudza nhasi, uchava neni muParadhiso.”+ 44 Pari zvino yakanga yava awa yechi6,* asi rima rakava panyika yese kusvikira paawa yechi9,*+ 45 nekuti chiedza chezuva chakadzima; keteni renzvimbo tsvene+ rakabva rabvaruka nepakati.+ 46 Uye Jesu akashevedzera nenzwi guru, akati: “Baba, ndinoisa mweya wangu*+ mumaoko enyu.” Paakataura izvi, akabva afa.*+ 47 Paakaona zvakanga zvaitika, mukuru weuto akatanga kukudza Mwari, achiti: “Chokwadi murume uyu anga akarurama.”+ 48 Uye vanhu vese vakanga vaunganira kuzoona zvaiitika pavakaona zvakanga zvaitika, vakadzokera kumisha yavo vachizvirova zvipfuva. 49 Uye vese vaimuziva vakanga vakamira nechekure. Uyewo vakadzi vakanga vauya naye kubva kuGarireya vaivapo uye vakaona zvese izvi.+ 50 Uye kwaiva nemumwe murume ainzi Josefa, nhengo yeDare, akanga ari munhu akanaka uye akarurama.+ 51 (Murume uyu akanga asina kutsigirana navo pavakarangana uye pane zvavakazoita.) Aibva kuArimatiya, guta revaJudhiya, uye akanga akamirira Umambo hwaMwari. 52 Murume uyu akaenda kuna Pirato, akakumbira chitunha chaJesu. 53 Uye akachiburutsa,+ akachiputira nejira rakanaka, akachiradzika muguva* rakanga rakacherwa padombo,+ makanga musati mamboradzikwa munhu. 54 Rakanga riri zuva reKugadzirira,+ uye Sabata+ rakanga rava kuda kutanga. 55 Asi vakadzi vakanga vabva naye kuGarireya vakaendawo, vakatarisa guva* racho, vakaona kuti chitunha chake chakanga charadzikwa sei,+ 56 uye vakadzokera kunogadzirira zvinonhuhwirira nemafuta anonhuhwirira. Asi sezvagara zvichiitwa, vakazorora paSabata+ maererano nemurayiro.
^ ChiGir., “Bvisai uyu pano.”
^ Kana kuti “simba rangu reupenyu.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti pneuʹma. Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “afema kekupedzisira.”
^ Kana kuti “guva rekuyeukwa.”